myCANAL, TV en live et replay အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
4.2 | 10,000,000+ ထည့်သွင်းရန် | သုံးသပ်ချက်မျာ
ဒေါင်းလုပ် XAPK（16.8MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် myCANAL, TV en live et replay
Mycanal နှင့်အတူ Mycanal နှင့်အတူ Live တွင်ကြီးမားသောအချိန်လေးများနှင့်အတူသင်၏ထုတ်လွှတ်မှုများကိုပြန်လည်ထုတ်လွှတ်မှုများကိုရှာဖွေပါ။ သင်၏ဖန်သားပြင်များအားလုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အကြံပြုချက်များကိုရှာဖွေပါ။
ရုပ်ရှင်ရုံ, ဇာတ်ညွှန်း, အားကစား, ဖျော်ဖြေရေး, ဖျော်ဖြေရေး, MyCanal တွင်
●●●●●သင်ဟာ Channel ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုအတွက်စာရင်းသွင်းထားပြီးသားဖြစ်နေပြီ, Mycanal ကိုမင်းရဲ့ subscription မှာပါ0င်ပါတယ်။
စာရင်းပေးသွင်းသူမရှိသေးဘူးလား။ Mycanal သည် Channel မှကမ်းလှမ်းမှုများကိုရယူခြင်းဖြင့်လက်လှမ်းမီနိုင်သည်။
Mycanal နှင့်သင်၏ subscription နှင့်0န်ဆောင်မှုများတွင်လမ်းကြောင်းများအားလုံးကိုခံစားကြရသည် - Le Live: Subscription နှင့်အညီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလိုင်း 180 အထိရနိုင်သည်။ VF နှင့် VOD အတွက်။ *
- download: offline ကိုပင်ကြည့်ရှုရန် **
ကိုကြည့်ရှုရန် - ultra ရိုးရှင်းသောလက်လှမ်းမီမှုနှင့်အတူ ultra ရိုးရှင်းသောလက်လှမ်းမီမှုနှင့်အသက်အရွယ်အတွက် ultra ရိုးရှင်းသောလက်လှမ်းမီမှုနှင့်ခေတ်မီသောကလေးများပါ0င်သည် အာဖရိကနှင့် droms များ)
စိတ်ကြိုက်အကြံပြုချက်များ - သင်၏အရသာများနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသောပရိုဂရမ်များကိုရွေးချယ်ခြင်း - ဖန်သားပြင်များပေါ်တွင်ဖတ်ရှုခြင်း။ အားကစားရေးသားခြင်းဖြင့်တည်းဖြတ်ခြင်း, Multi-Live တွင်သာတည်းဖြတ်ခြင်း, Multi-Live:2မှ4ခုမှ4ခုမှ4ခုမှ4လိုင်းများကိုဖန်သားပြင်တစ်ခုတည်းတွင်သာတွေ့နိုင်သည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ)
- သင်၏အချက်အလက်များသုံးစွဲမှုကိုကန့်သတ်ရန်ကိရိယာများ - ... နှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်များသင်စွန့်ခွာသွားသောအခြားအင်္ဂါရပ်များ။
အစည်းအဝေး, Caribbean, Caledonia, Mauritionius သို့မဟုတ်အာဖရိကတို့တွင်ရုပ်သံလိုင်းကမ်းလှမ်းချက်မှထုတ်ပေးသူများ။ Mycanal သည်0ယ်ယူသူများကိုသီးသန့်အပ်နှံသည် (စာရင်းသွင်းခြင်းတွင်ပါ0င်သည်) ကိုသီးသန့်အပ်နှံသည်။
VOD ငှားရမ်းခနှင့်ဝယ်ယူမှုမရရှိနိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ရရှိနိုင်သည့် channel အားလုံးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန် CanalPlus [ဇယား] ကိုသွားပါ .com .com .com ။
N.b. : 1. Google Play မှတစ်ဆင့်စာရင်းသွင်းပါကသင်၏လစဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းအား0ယ်ယူမှု၏အတည်ပြုချက်အရသင်၏ Google Play အကောင့်သို့သင့် Google Play အကောင့်သို့ငွေသွင်းလိမ့်မည်။0န်ဆောင်မှုပေးခြင်းသည်လျှောလစာမျက်နှာ၏အဆုံးတွင်အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးရန်အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးခြင်း, သက်တမ်းတိုးခြင်းကိုသင်၏အကောင့်မှလက်ရှိကာလ၏အဆုံးတွင်လက်ရှိကာလအဆုံးတွင် 24 နာရီအတွင်းဖြင့်သင်၏အကောင့်မှထုတ်ယူလိမ့်မည်။2။ အကယ်. သင်သည် Google Play မှတစ်ဆင့်စာရင်းသွင်းခြင်းမပြုပါကသင်၏0က်ဘ်ဆိုက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်0င်ရောက်နိုင်သောသင်၏0ယ်ယူနိုင်သောနေရာမှသင်၏0န်ဆောင်မှုပေးနိုင်မှုမှတစ်ဆင့်သင်၏ subscription ကိုစီမံနိုင်သည်။ လျှောက်လွှာသည်ဥရောပသမဂ္ဂ၏နယ်မြေအားလုံးတွင် 3G / 4G နှင့် / သို့မဟုတ် Wi-Fi အဖုံးတွင်အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ - သဟဇာတ android 4.4 နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်။ - DRM Widevine Google Native Player သည် MyCanal တွင် encrypted content ကိုသင်သုံးစွဲနိုင်မည်မဟုတ်ပါ - Wi-Fi mode ကိုကျွန်ုပ်တို့အခွင့်ထူးပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးသည်။ Edge / 3G / 4G သည်အော်ပရေတာအထောက်အပံ့များဖြစ်စေနိုင်သည်။ Replay changels တစ်ခုချင်းစီကိုရပ်ကွက်တစ်ခုချင်းစီကိုတိကျတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
ကြေညာသူများတောင်းဆိုချက်အရအချို့သောပရိုဂရမ်များသည် MyCanal တွင်ဖြန့်ဝေခြင်းသို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ Wi-Fi တွင်ရရှိနိုင်မှုကိုရရှိနိုင်သောလမ်းကြောင်းများနှင့်0န်ဆောင်မှုများ။ Download, ပရိုဂရမ်ရရှိမှုနှင့်ဖန်သားပြင်များအရသိရသည်။
အသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများ - https: // static /infoslegals/production/cgu.html
ဘာအသစ်လဲ myCANAL, TV en live et replay 5.11.0